Nkọwa: Threedị akụkụ buru ibu buru ibu, dabara maka nnukwu nwamba na nkịta. Nnukwu windo ihuenyo + oghere ikuku dị n'elu na-enye anụ ụlọ ahụ ahụmahụ na-enye ume ọhụrụ n'oge ọkọchị. Foldable bara uru imewe, na-azọpụta ohere na-adaba adaba ebu. Ugboro abụọ mgbochi ụzọ mgbapụ imewe, mgbochi oghere mkpọchi uwe + traction nkechi. Adjustmentdị nhazi mgbanwe dị iche iche na-eme ka ọ dabara ma kwụsie ike na azụ, na eriri ubu elu nwere ike gbanwee, na-eme ka ọ dị mfe ibu. Nhazi zuru ụwa ọnụ na oge anọ, ọnọdụ abụọ na ọtụtụ arụmọrụ na-eji ihe mkpuchi ihu. Ise nchegbu, ise isi nchegbu isi nke n'úkwù, ubu, obi, na azụ na buttoto, belata nrụgide nke amị. Piel e biri ebi plastic shei, biko ọchịchịrị, ozugbo ọkụ, ka nwamba na-ele anya na ụwa na-eche ihe nchebe. Nnukwu ohere na-eme ka anụ ụlọ tụgharịa ma nweere onwe ha.
Nke gara aga: Puppy Dog Clothes Female Teddy Bichon Pomeranian Schnauzer Small Thick Four-legged Pet Autumn and Winter Coat
Osote: Ala Pet Medicine edingnụrụ Ngwaọrụ Nri Medicine Stick Universal maka Nkịta na nwamba Nwere Ike Fedri Calcium Mbadamba ọgwụ ọchụ
Pet Hair Knot Comb Cat Comb Dog Nnukwu Ahịrị Ikpo St ...